Akụkọ - Otu atọ nke Nitrogen Generator
Udi atọ nke Nitrogen Generator
A na-eji ihe ọkụkụ nitrogen eme ihe n'ọtụtụ ebe na kemịkalụ, eletrọnịkị, ọla, nhazi nri na ụlọ ọrụ taya rọba. Enwere ike kewaa ya ụzọ atọ:
1.Cryogenic ikuku nkewa Nitrogen Generator
Nke a bụ usoro mmepụta nitrogen ọdịnala, nke nwere akụkọ ihe mere eme nke iri afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ na-ewe ikuku dị ka akụrụngwa, mgbe mkpakọ na ọcha, mgbe ahụ, na-agbanye ikuku n'ime ikuku mmiri mmiri site na mgbanwe okpomọkụ. Ikuku mmiri mmiri bụ ngwakọta nke oxygen mmiri mmiri na nitrogen mmiri mmiri. Dị ka isi ihe dị iche iche na-esi esi mmiri oxygen na mmiri mmiri nitrogen (na 1 ikuku ikuku, ebe esi mmiri oxygen bụ - 183 na esi mmiri nke nitrogen mmiri - 196), nitrogen na-ekewa site mmiri mmiri distillation ikuku.
The cryogenic ikuku nkewa nitrogen generator bụ mgbagwoju, na-ekpuchi a nnukwu ebe, nwere nnukwu otu oge itinye ego, elu ewu na ọrụ na-eri, ngwa ngwa gas mmepụta (12 ~ 24 awa) , elu echichi chọrọ na ogologo okirikiri. Ọ dabara maka nnukwu mmepụta nitrogen mmepụta ihe.
2.PSA nitrogen generator
Ọ na-eji ikuku dị ka akụrụngwa na carbon molecular sieve dị ka adsorbent. Dị ka ụkpụrụ nke mgbali swing adsorption, na-eji carbon molecular sieve ikewa nitrogen na oxygen, ọ na-akpọ PSA nitrogen generator.
Usoro a bụ teknụzụ mmepụta nitrogen ọhụrụ emepụtara ngwa ngwa na 1970s. E jiri ya tụnyere usoro mmepụta nitrogen omenala, ọ nwere uru nke usoro dị mfe, ogo dị elu nke akpaaka, mmepụta gas ngwa ngwa (15 ~ 30 nkeji), obere ume ike, ụdị dị iche iche nke ịdị ọcha ngwaahịa, ọrụ dị mma na mmezi na ọnụ ala dị ala.
3.Membrane Nkewa Nitrogen Generator
Na-eji ikuku eme ihe dị ka akụrụngwa, dabere na ọsọ ọsọ dị iche iche dị na akpụkpọ ahụ, oxygen na nitrogen ga-ekewa n'okpuru nrụgide ụfọdụ. E jiri ya tụnyere ndị na-emepụta nitrogen ndị ọzọ, ọ nwere uru nke usoro dị mfe, obere olu, enweghị valvụ na-agbanwe, obere mmezi, mmepụta ngwa ngwa gas (nkeji 3) na mmụba ikike dị mma. Kwesịrị ekwesị maka obere ndị ọrụ nwere ịdị ọcha nitrogen nke 98%.
Oge nzipu: Ọktoba 20-2021
Hydrogen na Oxygen Generator, Ọgbọ ike hydrogen, Atlas Copco Ngp, Holtec Nitrogen Generator, Psa Nitrogen osisi, Psa Nitrogen,